Early Dawn Microfinance မှ Individual Lending Loan Officer (Myinchan & Taungthar) | MyJobs
/ Individual Lending Loan Officer (Myinchan & Taungthar)
Individual Lending Loan Officer (Myinchan & Taungthar)
Prospect, promote, identify and recruit potential clients for DAWN´s Individual Lending Unit. Conduct financial appraisal of the business, follow-up clients in arrears, and provision of strong customer service. Build and maintainahealthy portfolio of individual loans.
သတ်မှတ်ထားသော နယ်မြေဒေသအတွင်း တစ်ဦးချင်းချေးငွေဌာနအတွက် စျေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တိကျခိုင်မာသော စျေးကွက်အတွင်းရှိ အလားအလာရှိသော ချေးငွေယူမည့်သူများ ရှာဖွေစုဆောင်းရရှိရေး။
ငွေချေးသူ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို အတည်ပြုစစ်တမ်းကောက်ယူနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းပရဝဏ်နှင့် အနီးတဝိုက်တွင် သွားရောက်လည်ပတ် စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း။
Dawn မှချမှတ်ထားသော နည်းလမ်းအတိုင်း ချေးငွေယူသူအသစ်နှင့် အဟောင်းတို့၏ ပြန်ဆပ်လိုစိတ်နှင့် ပြန်ဆပ်နိုင်စွမ်းများကို ချင့်ချိန်ခန့်မှန်နိုင်ခြင်း။
ချေးငွေခွင့်ပြုရန်အတွက် ချေးငွေစီစစ်၊ အကဲဖြတ်အဖွဲ့နှင့်အတူ ဆွေးနွေးထောက်ခံခြင်းများတွင်လည်း ပါဝင်ခြင်း။
ငွေချေးသူများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် ငွေချေးသူများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ခြင်း။
ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ပြဿနာများကို သိရှိနိုင်ရန် ငွေချေးသူ၏ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာ စောင့်ကြည့်ခြင်း။
အဖွဲ့အစည်း၏ ချက်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ ငွေနောက်ကျမှု ပြဿနာကို ကိုင်တွင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း။
ဌာနမှ ချမှတ်ထားသော လျာထားချက်များဖြစ်သည့် ချေးငွေယူသူများ၊ ထုတ်ချေးမည့် ငွေပမာတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းများအား ပြည့်မှီနိုင်ရန်အတွက် မန်နေဂျာအား ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း။
ကြီးကြပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တစ်ခြားသော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်ခြ
• Myanmar national.
• University graduate in finance, economics, accounting or related field.
• တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ စီပွားရေး (သို့) ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲရေး (သို့) စာရင်းအင်းတို့ နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သော ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
• One year working experience as microfinance individual loan officer or in retail banking or sales preferably in the specific market segment for the Individual Lending Unit.
Cashier (Lewe, Naypyitaw) (လယ်ဝေးမြို့နယ်)
Loan Officer - Male Only (Magway)
Loan Officer - Male Only (Lewe,လယ်ဝေးမြို့)